မီးကုန်ယမ်းကုန်စားနိုင်သူတွေအတွက် မာလာရှမ်းကောအလကားစားရမယ့် အထူးအခွင့်အရေး ? – FoodiesNavi
မီးကုန်ယမ်းကုန်စားနိုင်သူတွေအတွက် မာလာရှမ်းကောအလကားစားရမယ့် အထူးအခွင့်အရေး ?
By yin sandi On July 13, 2018 0
မီးကုန်ယမ်းကုန်စားနိုင်တဲ့အစားတစ်လိုင်းတို့အတွက် တကယ့်ကိုရင်ခုန်စရာသတင်းလေးတွေ့လို့ လက်တို့ပြီးပြောပြပေးမယ်နော်။ ဘယ်လောက်တောင်စားနိုင်တယ်ဆိုပြီး ဟစ်ကြွေးနေရုံနဲ့ အလုပ်မဖြစ်တော့ပါဘူး။ အစားနဲ့လက်တွေ့သက်သေပြရမယ့်အချိန်အခါပါနော်။ မာလာရှမ်းကောကြိုက်တဲ့လူဆိုရင်တော့ ထတောင်ကနိုင်မယ့် အထူးသတင်းစကားလေးပါနော်။ မာလာရှမ်းကောကို(၁၀)မိနစ်အတွင်း အပြောင်ကြိတ်နိုင်မယ်ဆိုရင် ပိုက်ဆံရှင်းစရာမလိုဘဲ Free စားရမှာတဲ့ ? ဒီတခါ Free စားရရုံတင်မကသေးဘူးနော် နောက်တကြိမ်လာစားရင် ၁၀ရာခိုင်နှုန်း Discount ဆိုတော့ အပီအပြင်သွားစားဖို့ မောင်းတင်ထားလိုက်တော့နော်။
ဒီလိုအထူးအခွင့်အရေးရရှိနိုင်တဲ့ဆိုင်လေးကတော့ စမ်းချောင်းထဲက ”7Stars Hot Pot ” ဆိုင်မှာပါ။ (၁၀)မိနစ်အတွင်းအပြီးစားရမယ်ဆိုတော့ ဘယ်လိုအရသာမျိုးကိုစားရမှာလဲ တွေးပူကောင်းတွေးပူနေပါလိမ့်မယ်။ လုံးဝမစိုးရိမ်ပါနဲ့ ပုံမှန်အစပ် ၊ ပုံမှန်အထုံဓာတ်တွေပဲဖည့်ထားတာမို့ တကယ်စားနိုင်တဲ့လူအတွက် မခက်ခဲတဲ့ပမာဏပါနော်။ အရသာကလည်းစွန်းဖိုင်းပဲ။ ဒါပေမယ့် (၁၀)မိနစ်အတွင်းစားမကုန်ဘူးဆိုရင်တော့ မာလာရှမ်းကောရဲ့တန်ဖိုးအတိုင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
မာလာရှမ်းကောအသည်းစွဲတွေတော့ တပျော်တပါးကြီးစိန်ခေါ်ပြီး ပြိုင်စားကြဦးမှာ မြင်ယောင်ပါသေးတယ်။ ဒီအစီအစဉ်လေးကလည်း ဇူလိုင်လကုန်ထိပဲမို့ အချိန်တွေသိပ်မဆွဲဘဲ အမြန်ဆုံးဒိုးလိုက်တော့နော်။ ဆိုင်လိပ်စာကတော့ အမှတ်(၁၈၇/A) ၊ ဗဟိုလမ်း ၊ ရွှေလောင်းလမ်းထိပ် ၊ ဂွဈေးအနီး ၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုင်ဖွင့်ချိန်ကတော့ မနက်(၁၀)နာရီခွဲကနေ ည(၉)နာရီခွဲအထိပဲဖြစ်ပါတယ်။
Image Source: www.facebook.com/7stars
ကမ္ဘာပေါ်မှာအလေးဆုံးဖြစ်တဲ့မျက်ခွံတွေကို အချဉ်စူးစူးရှောက်သီးသုပ်လေးစားပြီး ဖယ်ရှားကြမယ် ?